Farmaajo oo shaaciyey laba sabab oo uu uga tanaasulay doorasho qof iyo cod ah | Xaysimo
Home War Farmaajo oo shaaciyey laba sabab oo uu uga tanaasulay doorasho qof iyo...
Farmaajo oo shaaciyey laba sabab oo uu uga tanaasulay doorasho qof iyo cod ah
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadal ka jeediyey munaasabad casho sharaf ah oo uu ku maamuusay Madaxda ka qeyb gashay shirkii doorashooyinka ee Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday sababta uu uga tanaasulay doorasho qof iyo cod ah.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inuu tanaasulay kadib marki dowlad goboleedyada ay ku hanjabeen inay doorashada qaadacaan oo dalku kala tago, taasi oo keeni lahayd in shisheeye soo faro-geliyo.
“Waxaa ku tanaasulay markii ay gaartay meesha ugu dambeysay oo ah in la kala tago oo dadka rajo xumo la geliyo. Waxaa isoo baxday labo inaan kala doorto, oo ah in dalku kala tago oo wadajirkeena lumo anoo ku adkeysanaya doorasho qof iyo cod ah, iyo inaan dalka isku hayo oo aanu kala tagin, oo aanu shisheeye na soo faragelin, taas ayaa keentay inaan qaato tanaasul iyo waxeena ha xumaado ha samaato aan gaarno go’aankeeda mas’uuliyadeeda qaadano, laakiin shisheeye aanu marna na soo dhex gelin,” ayuu yiri madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in dhammaan madax goboleedyada ay dhinac uga soo wada jeesteen, oo xitaa uu waayey kuwii uu mooday inay la safan yihiin.
“Markii halkan ay yimaadeen, waxaan dhahay i keena wax umadda Soomaaliyeed ku qanacdo oo sharci iyo dastuur ku dhisan, raggii aan moodayay inay ila socdeen iyagaa ugu horreeyay, taas waxay igu abuurtay shaki u baahan in la baaro,” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Waxa uu tilmaamay in isu tanaasulka iyo ka shaqeynta danta guud ay aas-aas u tahay hirgelinta doorasho loo dhan yahay oo rajo gelinaysa shacabka Soomaaliyeed.
“Si aan shisheeye inoo soo faragelin, waa in aan innagu leenahay go’aanka arrimaheenna, ha wanaagsanaadaan ama ha xumaadaan, masuuliyaddeedana aan qaadanno. Dalkeennu in uu xasilo oo dadkeennu isfahmaan dalal iyo shakhsiyaad ayaa u arka khasaarahooda.”
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka warbixiyey duruufaha ku xeeran doorashooyinka dalka iyo dadaalka muuqday ee Dowladda Federaalka ay ku bixisay hirgelinta doorasho loo dhanyahay oo ka tarjumeysa rajada iyo hiigsiga shacabka Soomaaliyeed.
Munaasabaddan casho-sharafta ah waxaa lagu maamuusay Ku-Simaha Ra’iisulwasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed, Madaxweyneyaasha Dowlad Goboleedyada, Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam, Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed, Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare, Galmudug Axmed Cabdi Kaariye iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cumar Maxamuud Maxamed.